सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आकर्षण बढेको छ
As of Tue, 14 Jul, 2020 04:15
जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध–विच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता नागरिकले वालिग भएपछि पाउने नागरिकताजस्तै महत्वपूर्ण छन् । यी घटना निरन्तर भइरहने भएकाले कानुनी रूपमा समयमै सम्बन्धित स्थानीय तहमा गएर दर्ता गराउनु प्रत्येक व्यक्तिको जन्मसिद्ध, मौलिक र संवैधानिक हक–अधिकार हो ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता गराएर पञ्जीकृत हुनु व्यक्तिको दायित्व भएसँगै त्यसलाई दर्ता गर्नु, अभिलेख राख्नु देशको आधारभूत काम पनि हो । जनसांख्यिक तथ्यांकको प्राप्ति, नीति–नियम बनाउन सहयोग गर्नु, तत्कालीन तथ्यांक उपलब्ध गराउनु, व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु अति महत्वपूर्ण कार्य हो ।
नेपालमा यो कार्य हाल पञ्जीकरण विभाग मातहत हुँदै आएको छ । यस्तै, मुलुकको सबैभन्दा पपुलर स्किमका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन पनि पञ्जीकरण विभागले नै गर्छ । २०४४ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अनिलकुमार ठाकुर विगत आठ वर्षयता केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको सहसचिवमा कार्यरत छन् ।
उनले केही जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेका छन् । हाल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक रहेका ठाकुरसँग पञ्जीकरण भनेको के हो ? किन गर्ने ? यसअन्तर्गत के–कस्ता कार्यक्रम छन् ? र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अवस्थालगायतका बारेमा कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानी :
पञ्जीकरण भनेको के हो ? केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले के–कस्ता काम गर्दै आएको छ ?
व्यक्तिगत घटना दर्ताअन्तर्गतका जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध–विच्छेद र बसाइँसराइजस्ता पाँचवटा महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कार्यको आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी त्यसको अभिलेख राख्ने, अद्यावधिक गर्ने, व्यवस्थित गर्ने कार्य नै पञ्जीकरण हो ।
यस्ता व्यक्तिगत घटना भइरहने हुनाले कानुनी रूपमा योग्यता पुगेको व्यक्ति सूचना दिन आएपछि निश्चित प्रक्रिया पु¥याई गरिने दर्तालाई नै पञ्जीकरण भनिन्छ । यसले नागरिकलाई आधारभूत कानुनी अधिकार दिलाउन सहयोग गर्छ ।
केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा घटना दर्तासम्बन्धी कामको सम्पादन तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिमार्फत हँुदै आएकोमा उक्त कार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र दिगो बनाउन २०७१ साल असोजमा यस विभागको गठन भएको हो ।
यसैले यसको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै स्थानीय तहसँग रहँदै आएको हो । अब पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गरिनेछ । पञ्जीकरणको कार्य राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विभिन्न प्रमाणपत्रका लागि चाहिन्छ ।
अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको पनि कुरा उठिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि कुनै न कुनै रूपमा विभागसँग जोडिनैपर्ने देखिन्छ । बच्चाको जन्म भएपछि त्यसको दर्ताका आधारमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्छ ।